Dowlada oo dooneysa in Lacagta deynta loo fududeeyo Dadka u baahan Leysinka Gawaarida (Körkort)
HomeWararka SwedenDowlada oo dooneysa in Lacagta deynta loo fududeeyo Dadka u baahan Leysinka Gawaarida (Körkort)
6 months ago Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Dad aad uga tiro yar intii la filayey ayaa qaatay amaahda laysanka wadista ee gaariga ee CSN. Tan waxaa ku dhawaaqay Wasiirka Kaabayaasha Tomas Eneroth horaantii toddobaadkan. Dawladdu waxay hadda uxilsaartay CSN inay soosaarto soo jeedinno ku saabsan sida habka dalabka loo adkeyn doono iyo xeerarka Fududeenaya lacagta amaahda
Iskuulka taraafikada ee kuyaala XaafadaTensta ee Stockholm, boqolkiiba toban ardayda iskuulka wadista ayaa ilaa hada qaatay amaahda liisanka wadista. ayuu yiri macallin Mohammed Saheb.
– Way fududaanaysaa. Waxay caawinaysaa kuwa aan awoodin inay helaan laysanka darawalka iyo kuwa u baahan shaqo, ayuu yidhi.
Si dad badani u galaan suuqa shaqada, waxay dowladdu soo bandhigtay suurtagalnimada ah qaadashada amaahda CSN ee ku saabsan laysanka wadista baabuurta ku dhawaad ​​laba sano ka hor, haddii aad tahay shaqo doonee inta u dhaxaysa 18 iyo 47 oo aad ka diiwaangashan tahay xafiiska shaqada.
Ilaa Juun ee sannadkan, in kabadan 15,600 dalabyo ah oo loogu talagalay amaahda liisanka wadista ayaa la oggolaaday, taasoo ah kaliya 55 boqolkiiba dhammaan codsiyada.
Sida laga soo xigtay CSN – oo maareysa codsiyada – sababta ugu weyn ee diidmada ayaa ah in dad badan oo dalbaday aysan buuxin shuruudaha shaqo la’aanta.